चुनावी प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो नेता ज्यू ? – दैनिक नेपाल न्युज
रुपन्देही, २८ कात्तिकः चुनावी प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो नेता ज्यू ? जनताले यस्तो प्रश्न सोध्दा प्रायः नेताहरुको बोली नै बन्द हुन्छ । कतिपय नेताको शिर निहुरिन्छ । केहीले असहज परिस्थितिलगायतका कारण देखाएर जनताका प्रश्न थामथुम गर्ने प्रयास गर्छन् । तर, रुपन्देहीमा भने त्यस्तो भएन । चुनावी प्रतिबद्धताको समीक्षासहितको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा जनताका प्रश्नको जवाफ दिन उपस्थित भएका यहाँका नेताले शिर ठाडो पारेर बोले । नेताहरुले चुनावी प्रतिबद्धताअनुरुप भइरहेका विकासे आयोजनाको फेहरिस्त जनता सामु राख्दा यहाँका सर्वसाधारण खुशी हँुदै ताली बजाए ।
कतिपय समस्या रहे पनि अधिकांश राम्रा काम भएको स्थानीय मतदाता देवी वाग्लेले बताउनुभयो । खासगरी सांसद पौडेल र नगर प्रमुख घिमिरेले यहाँको विकास र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै मतदातले प्रशंसा गरे । (रासस)
राष्ट्रपतिको आग्रह : बौद्ध दर्शन र बुद्धका उपदेश पाठ्यक्रममा समावेश गरौँ
रुपन्देही, १६ मङ्सिरः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतम बुद्धका कालजयी उपदेश तथा शिक्षालाई आ–आफ्ना पाठ्यक्रममा यथाशक्य समावेश गर्न विश्वविद्यालयलाई आग्रह गर्नुभएको छ । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको १७औँ वार्षिकोत्सव तथा त्रियान प्रज्ञा [...]